गाँजाबाट के साच्चिकै कोरोना भाइरस मर्छ ? यस्तो छ बास्तविकता – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/गाँजाबाट के साच्चिकै कोरोना भाइरस मर्छ ? यस्तो छ बास्तविकता
गाँजाबाट के साच्चिकै कोरोना भाइरस मर्छ ? यस्तो छ बास्तविकता
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस बारे विभिन्न खाले अफवाहहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा यत्रतत्र हेर्न र सुन्न पाइन्छ । बिबिसीले त्यस्ता भम्रपूर्ण दाबीहरुको जाँच गरेको थियो, जुन पछिल्लो साता सामाजिक सञ्जालहरुमा सबैभन्दा धेरै सेयर गरिएका थिए ।
यसमा गाजा सेवन गरे कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने एउटा दाबी पनि समावेश थियो । हजारौ मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा कोरोना भाइरसविरुद्धको उपचारमा प्रभावकारी हुने भन्दै विभिन्न पोष्टहरु सेयर गरेका थिए ।
यस्तो पोष्टमध्ये केही लेख तथा तिनका शीर्षकहरु भ्रामक र गलत जानकारी प्रदान गर्ने खालका थिए । यो सत्य हो कि क्यानडा, इजरायल र बेलायत जस्ता अन्य देशहरु कोरोनाको उपचारमा गाजा प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने विषयको परीक्षणमा लागिरहेका छन् । परीक्षणका क्रममा औषधीय गुण भएको गाजाले संक्रमणको अवधि कम गर्नमा सफलता देखिएको छ र हुन सक्छ, यसलाई साइटोकाइन स्ट्रोमको उपचारमा प्रयोग गर्न सकियोस् ।
साइटोकाइन स्ट्रोम कोरोना संक्रमण भएका गम्भीर बिरामीहरुमा देखिने गर्दछ । तर, यो सबै कुराहरु अहिले परीक्षणकै क्रममा रहेका छन् । त्यसैले कोरोनाको संक्रमणको प्रभावकारी उपचारमा गाजा सहयोगी हुन्छ भन्नु हतार हुनसक्छ । क्यानडाको एक अध्ययनमा आधारित यस्तै एक लेखलाई फेसबुकले आंशिक रुपमा गलत जानकारी दिने लेख भनेको छ । उक्त लेखमा गाजाले कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सकिने भन्ने दाबी गरिएको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि गाजालाई कयौ रोगहरुको उपचारमा सहयोगसिद्ध हुने भन्दै प्रचार हुँदै आइरहेको छ । यस विषयमा गरिएका अनुसन्धानहरुको परिणामहरु मिश्रित खालका छन् र यसमा मानिसहरुको उत्सुकता पनि धेरै नै देखिँदै आइरहेको छ ।
करिश्माको त्यो पल जुन हनिमुन मनाउँन जाँदा श्रीमानले नै साथीहरुसँग गरेका थिए सम्झौता